Sidee ku ogaan kartaa haddii lamaanahaaga uu sidoo kale yahay saaxiibkaaga ugu fiican | Bezzia
Sida loo ogaado haddii lamaanahaagu uu sidoo kale yahay saaxiibkaaga ugu fiican
Maria Jose Roldan | 11/05/2022 22:32 | Xiriirka
Fikradda lammaanaha naftu waa shay uu qof kastaa u hamuumayo inta uu nool yahay. Awood u yeelashada inaad qof kula xidhiidho heer shucuureed iyo mid saamayn leh iyo lahaanshaha dhibka dhabta ah waa waxa loo fahmay jacayl dhab ah. Helitaanka lammaanaha inuu noqdo saaxiibkaaga ugu fiican waa wax aan ka dhicin dhammaan cilaaqaadka. Xaqiiqadani waa furaha marka isku xirka la abuuray uu sii socdo waqti ka dib.
Maqaalka xiga waxaan ku siineynaa furayaal taxane ah si aad u ogaatid haddii lamaanahaagu sidoo kale yahay saaxiibkaaga ugu fiican.
Furaha si aad u ogaato in lammaanahaagu yahay saaxiibkaaga ugu fiican
Waxaa jira tilmaamo ama calaamado taxane ah oo muujin kara in lammaanuhu sidoo kale yihiin saaxiibka ugu fiican:
Jacaylka ku saleysan saaxiibtinimada wuxuu abuuraa xiriir adag kaas oo qiyamka muhiimka ah ay joogaan. sida kalsoonida, ixtiraamka ama kalgacalka. Waxaas oo dhami waxay keenaysaa dareen farxadeed in lagu rakibo xidhiidhka, taas oo lama huraan u ah in lammaanuhu ay sii xoogaystaan ​​oo ay adkaystaan ​​inkasta oo waqtigu socdo.
Jaceylka iyo kalgacalka ka dhex jira lamaanaha ayaan haba yaraatee la jaan qaadi karin in la isku khilaafo arimo kala duwan. Way caafimaad qabtaa in xidhiidhku uu dhawro jagooyinka iska soo horjeeda mar mar. Tani waxay muhiim u tahay marka lammaanuhu koraan oo ay sii xoogaystaan.
Saaxiibtinimada ka dhex jirta lamaanaha ayaa ah mid dhab ah marka qolo walba ay kan kale u aqbasho sida ay tahay. Ma wanaagsana in lamaanaha uu isku dayo inuu buriyo dareenka qofka kale iyo isku day inaad ku soo rogto sida ay tahay inaad u fikirto.
Looma baahna in lamaanaha lagu eedeeyo khaladaadka ay samayn karaan. Saaxiibtinimada waxay ka dhex jirtaa lammaanaha marka ay labada qofba diiradda saaraan sidii ay xal ugu heli lahaayeen dhibaatooyinka suurtagalka ah ee soo baxa. Faa'iido ma leh in si caadi ah loo eedeeyo lammaanaha.
Xoriyaddu waa mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah marka ay timaado samaynta lammaanaha saaxiibka ugu fiican. Dhinac kasta oo xidhiidhka ka dhexeeyaa waa inuu ixtiraamaa kan kale iyo u dhaaf meel kugu filan oo aad si xor ah u dhaqanto.
Lammaanaha ay saaxiibtinimadu ka dhex jirto waxay yaqaaniin sida loo wada shaqeeyo. Dhibaatooyinka si wadajir ah ayaa loo falanqeeyaa, waxaana la sameeyaa go'aamada ugu fiican.
Mudnaanta mar walba waa lamaanaha. Muhiimadu waa in la caawiyo marka ay u baahan tahay iyo in la ogaado in aysan kaligeed ahayn marka ay timaado xallinta dhibaatooyinka kala duwan ee soo bixi kara.
Waxyaabo yar ayaa noloshan aad uga xiiso badan marka loo eego in aad mustaqbalka la wadaagto lammaanahaaga. Deji yoolal iyo yoolal mustaqbalka fog waa calaamad cad in labada lamaane ay yihiin saaxiibkayaga ugu fiican.
Inaad wada qosli karaan oo aad ku raaxaysan karaan hiwaayadaha kala duwan ee ay wadaagaan waa shay farxad gelinaysa lamaanaha iyo waxay ka dhigtaa saaxiibo fiican. Madadaalada wadajirka ahi waxay labada qof ka dhex abuurtaa xidhiidh cajiib ah oo ay adag tahay in la jebiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Sida loo ogaado haddii lamaanahaagu uu sidoo kale yahay saaxiibkaaga ugu fiican
Waa maxay toxoplasmosis sideese u saamaysaa uurka?
Dhibaatooyinka finanka? Cuntooyinka laga fogaado